Naya course » समयमा खाना र नास्ता नपाएको कोरोना संक्रमितको गुनासो समयमा खाना र नास्ता नपाएको कोरोना संक्रमितको गुनासो – Naya course
समयमा खाना र नास्ता नपाएको कोरोना संक्रमितको गुनासो
कोहलपुर (बाँके)/ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको आईसोलेशनमा रहेका कोरोना संक्रमित विरामीहरुले समयमा खाना र नास्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनिहरुले अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीले समयमा खाना र नास्ता नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
अहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको आईसोलेशनमा १६ जना कोरोना संक्रमितहरु रहेका छन् । आईसोलेशनमा रहेका कोरोना संक्रमित विरामीहरुले समयमा खाना र नास्ता नपाएको गुनासो पहिलो पटक आएको भन्दै अस्पतलका उप–निर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठले समयमै खाना तथा नास्ताको प्रवन्ध गर्न निर्देशन दिएको बताए । कोरोना संक्रमित विरामीहरुका लागी अस्पातलभित्रको मेसबाट खाना तथा नास्ताको व्यवस्थापन भैरहेको उप–निर्देशक डा. श्रोष्ठले बताए ।
अस्पताल भित्र मेस सञ्चालन गरिरहेका विष्णु रंजितले समय तालिका अनुसार समयमै खाना र नास्ता नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा रहेको आईसोलेशनको मुख्य ढोकामा रहेका सुरक्षा गार्डलाई बुझाउने गरेको बताए ।तर, आईसोलेशनमा रहेका कोरोना संक्रमित विरामीहरुले समय तालिका अनुसार खाना र नास्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । आज सोमवार विहानको खाना १ः४० बजे पाएको संक्रमित एक जनाले नयाँ कोर्सलाई फोनगरी जानकारी गराएका थिए ।
आईसोलेशनको मुख्य ढोकामा डियुटीमा रहेका सुरक्षा गार्ड गोपाल गुरुङ्गले यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनिले जवाफ दिन चाहेन्न् ।